Abantu Bayakhuphuka Ngesikhathi Sobhubhane nge-Breathtaking Innovations
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Abantu Bayakhuphuka Ngesikhathi Sobhubhane nge-Breathtaking Innovations
Ibhodi Yezokuvakasha yase-Afrika • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Izindaba zikaHulumeni • Health News • Izindaba • Abantu • Ukwakha kabusha • ezithrendayo Manje • I-USA Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezihlukahlukene
UBill Gates unomyalezo emhlabeni.
Imininingwane emisha yembula ukuthi umhlaba unyukele phezulu ukuvimbela izimo ezimbi ukwenzeka; izindawo ezikhanyiswayo zidinga ukutshalwa kwezimali isikhathi eside ukuze kuqinisekiswe ukuvuselelwa okulinganayo kanye nenqubekela phambili eqhubekayo ebheke ezinhlosweni zomhlaba wonke, ezaziwa njengeziNjongo Zokusimama Ezisimeme ze-UN.
IBill & Melinda Gates Foundation namuhla yethule Umbiko wayo wesihlanu wonyaka weGoalkeepers Report, oqukethe idathabheyisi ebuyekeziwe yomhlaba wonke ekhombisa umthelela omubi lo bhubhane enqubekelaphambili eya ezinhlosweni eziqhubekayo zeNhlangano Yezizwe Ezihlose Ukuthuthukiswa (Izinjongo Zomhlaba Wonke).
Umbiko walo nyaka, obhalwe ngokuhlanganyela nguBill Gates noMelinda French Gates, abangabahlalo beBill & Melinda Gates Foundation, ukhombisa ukuthi ukungafani okubangelwe yi-COVID-19 kusalokhu kugqamile, kanti labo abahlaselwe kakhulu yilolu bhubhane kuzoba yibo ihamba kancane ukuthola.
Ngenxa ye-COVID-19, abantu abengeziwe abayizigidi ezingama-31 badudulwa ubuphofu obukhulu ngo-2020 uma kuqhathaniswa no-2019. -iminotho yemali kulindeleke ukuthi yenze njalo.
Ngenhlanhla, phakathi kwalokhu kubhidlika, umhlaba wenyuka ukuze uvikele ezinye zezimo ezimbi kakhulu. Embikweni Wonozinti wangonyaka odlule, i-Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) yabikezela ukwehla kwamaphesenti ayi-14 ekusetshenzisweni komuthi wokugomela umhlaba wonke — isula kahle inqubekela phambili yeminyaka engama-25 emasontweni angama-25. Ukuhlaziywa okusha okuvela ku-IHME kukhombisa ukuthi ukwehla, yize kungamukeleki, bekuyingxenye nje yalokho obekulindelwe.
Embikweni, izihlalo ezibambisene nazo ziqokomisa "ukuqamba okumangazayo" obekungenzeka kuphela ngenxa yokubambisana komhlaba wonke, ukuzibophezela kanye nokutshalwa kwemali emashumini eminyaka edlule. Bayakuvuma ukuthi ukugwema izimo ezinzima kakhulu kuyancomeka, kepha bayabona ukuthi akwanele. Ukuqinisekisa ukululama okulingana ngokweqiniso kulo bhubhane, bafuna ukutshalwa kwezimali kwesikhathi eside kwezempilo nakwezomnotho — njengalezo ezaholela ekwakhiweni ngokushesha komuthi wokugoma i-COVID-19 — ukuhambisa imizamo yokululama nokubuyisela umhlaba esimweni ukuhlangabezana Izinjongo Global.
“[Unyaka odlule] uqinise inkolelo yethu yokuthi inqubekelaphambili iyenzeka kodwa ayinakugwenywa,” kubhala izihlalo ezabambisana. "Uma singanweba okungcono kakhulu kulokho esikubonile kulezi zinyanga eziyi-18 ezedlule, ekugcineni singalususa lolu bhubhane ngemuva kwethu futhi siphinde sisheshise inqubekela phambili ekubhekaneni nezinkinga ezisemqoka njengezempilo, indlala nokuguquka kwesimo sezulu."
Umbiko uveza umthelela ongalingani womnotho ubhadane olube nawo kwabesifazane emhlabeni jikelele. Emazweni ahola kakhulu futhi aphansi ngokufanayo, abesifazane bebelokhu bethwele kanzima kunabesilisa ngenxa yokwehla komnotho komhlaba okubangelwe yilo bhubhane.
"Abesifazane babhekene nezingqinamba zokwakheka kuwo wonke amagumbi omhlaba, okubashiya besengozini yokutheleleka ngalo bhubhane," kusho uMelinda French Gates. “Ngokutshala imali kubantu besifazane manje nokubhekana nalokhu kungalingani, ohulumeni bangakhuthaza ukululama okulinganayo ngenkathi beqinisa umnotho wabo ezinkingeni ezizayo. Akuyona nje into efanele ukwenziwa — kodwa inqubomgomo ehlakaniphile ezosiza wonke umuntu. ”
Lo mbiko ubuye ukhombise ukuthi lokho okubizwa ngokuthi “isimangaliso” semithi yokugoma i-COVID-19 kwaba ngumphumela wamashumi eminyaka wokutshalwa kwezimali, izinqubomgomo, kanye nokubambisana okwasungula ingqalasizinda, ithalente, kanye nezinhlelo zemvelo ezidingekayo ukuzisebenzisa ngokushesha. Kodwa-ke, amasistimu avumela ukuthuthukiswa nokusatshalaliswa komuthi we-COVID-19 ngendlela engakaze ibonwe akhona ikakhulukazi emazweni acebile, futhi ngenxa yalokho, umhlaba awuzuzanga ngokulinganayo.
"Ukungatholakali ngokulingana kwemigomo ye-COVID-19 kuyinhlekelele yezempilo yomphakathi," kusho uBill Gates. “Sibhekene nengozi yangempela yokuthi ngokuzayo, amazwe acebile nemiphakathi izoqala ukuphatha i-COVID-19 njengesinye isifo sobubha. Asikwazi ukuyeka lesi sifo kuze kube yilapho wonke umuntu, kungakhathaliseki ukuthi ehlala kuphi, eseyitholile imijovo yokugoma. ”
Ngaphezu kwama-80% ayo yonke imishanguzo ye-COVID-19 isetshenzisiwe emazweni anemali ephezulu nengenhla kuze kube manje, kanti amanye athola inani eliphindwe kabili noma kathathu kunesidingo esidingekayo ukuze ikwazi ukumboza ama-boosters; ngaphansi kokungu-1% kwemithamo kuye kwanikezwa emazweni anemali engenayo ephansi. Ngaphezu kwalokho, ukutholakala komuthi wokugoma i-COVID-19 kuhlanganiswe kakhulu nezindawo lapho kune-R & D yokugoma namandla okukhiqiza. Yize i-Afrika iyikhaya labantu abangu-17% emhlabeni, ngokwesibonelo, inamandla angaphansi kuka-1% wamandla okukhiqiza umuthi wokugoma.
Ekugcineni, lo mbiko unxenxa umhlaba ukuthi utshale imali ku-R & D, kwingqalasizinda, nasezintweni ezintsha ezindaweni eziseduze nabantu abazosizakala.
"Kumele sitshale imali kozakwethu bendawo ukuze siqinise amandla abacwaningi nabakhiqizi bamazwe ahola kancane ukudala imishanguzo nemithi abayidingayo," kusho isikhulu seGates Foundation uMark Suzman. “Ukuphela kwendlela esizoxazulula ngayo izinselelo ezinkulu kakhulu zezempilo ngukusebenzisa amakhono namasu abantu emhlabeni wonke.
Ngezindlela eziningi, ubhadane luvivinye ithemba lethu. Kepha ayikonakalisi.
Ngaphansi kwezimo ezinzima kakhulu ongazicabanga, sibone izinto ezintsha ezimangalisayo.
Sibonile ukuthi singakushintsha masishane kanjani ukuziphatha kwethu, njengabantu nanjengemiphakathi, lapho izimo zidinga khona.
Futhi namhlanje, singabika nokuthi abantu ezingxenyeni zonke zomhlaba bebelokhu bekhuphuka ukuvikela inqubekela phambili yentuthuko esesiyenzile emashumini eminyaka-uma kukhulunywa ngama-SDG, okungenani, umthelela wobhadane oluqhubekayo lwe-COVID-19 bekungaba kubi kakhulu.
Kube unyaka oqinise inkolelo yethu yokuthi inqubekelaphambili iyenzeka kepha ayinakugwenywa. Umzamo esiwenzayo ezindabeni mkhulu kakhulu. Futhi, njengezethembiso ezingenasineke, sikholwa ukuthi singaqala ukufunda empumelelweni nokwehluleka kwalolu bhubhane kuze kube manje. Uma singanweba okungcono kakhulu kwalokho esikubonile kulezi zinyanga eziyi-18 ezedlule, ekugcineni singabeka ubhadane ngemuva kwethu futhi siphinde sisheshise inqubekela phambili ekubhekaneni nezinkinga ezisemqoka njengezempilo, indlala nokuguquka kwesimo sezulu.
Yiziphi ezinye izixazululo ezisiza emjahweni wokuqeda ubhadane? Bukela uBill Gates nonozinti abathathu begqamisa amathuluzi asetshenziswayo ukulwa ne-COVID.
Funda lo mbiko:
Idatha Ixoxa Indaba Emangazayo
Ngonyaka odlule, bekulokhu kungenakwenzeka ukungazinaki izingqinamba ezigqamile hhayi nje kuphela ukuthi ngubani ogulayo nokuthi ngubani oshonile — kodwa nokuthi ngubani obezosebenza, ngubani ongasebenza ekhaya, futhi ngubani ophelelwe imisebenzi ngokuphelele. Ukungalingani kwezempilo sekudala njengezinhlelo zezempilo uqobo, kepha kwathatha ubhadane lomhlaba wonke ukukhumbuza umhlaba ngemiphumela yawo.
Izigidi Ezengeziwe Ngobumpofu Obedlulele
Kwabaningi, imithelela yezomnotho yalolu bhubhane iyaqhubeka nokuba nzima futhi ihlale njalo. Siyazi ukuthi singabonakala njengezithunywa ezingalindelekile ngalesi sihloko — singabantu ababili abanenhlanhla kakhulu emhlabeni. Futhi ubhadane lwenze lokho kwacaca nakakhulu. Abantu abanjengathi baye babhekana nobhubhane besesimweni esihle, kuyilapho labo abasengozini kakhulu beye bathinteka kakhulu futhi kungenzeka kube yibo abathatha kancane ukululama. Abantu abengeziwe abayizigidi ezingama-31 emhlabeni jikelele badudulelwe ebuphofini obukhulu ngenxa ye-COVID-19. Yize amadoda esengozini yokufa ngama-70% ngenxa ye-COVID-19, abesifazane bayaqhubeka nokuthinteka ngokungenakulinganiswa yimithelela yezomnotho nezenhlalo yalolu bhubhane: Kulo nyaka, ukuqashwa kwabesifazane emhlabeni jikelele kulindeleke ukuthi kuhlale imisebenzi eyizigidi eziyi-13 ngaphansi kwezinga lika-2019 — kuyilapho abesilisa Umsebenzi kulindeleke ukuthi ubuyele emazingeni angaphambi kobhadane.
Yize okuhlukahlukene kusongela ukubhekela phansi inqubekela phambili esiyenzile, eminye iminotho isiqala ukubuyela esimeni, iletha ukuvulwa kwamabhizinisi nokwakhiwa kwamathuba emisebenzi. Kepha ukululama akulingani phakathi kwamazwe — ngisho nangaphakathi — kwamazwe. Ngonyaka ozayo, isibonelo, u-90% weminotho esezingeni eliphakeme kulindeleke ukuthi ibuyise amazinga angaphambi kokubhebhetheka komuntu ngamunye, kuyilapho ingxenye yesithathu kuphela yomnotho ophansi nophakathi kulindeleke ukuba wenze okufanayo. Imizamo yokunciphisa ubuphofu imile — futhi lokho kusho ukuthi cishe abantu abayizigidi ezingama-700, iningi labo emazweni aphansi naphakathi, kulindeleke ukuthi bahlale becindezeleke kakhulu ngonyaka ka-2030.
Izikhala Ezikhulayo Kwezemfundo
Sibona indaba efanayo uma kukhulunywa ngemfundo. Ngaphambi kwalolu bhubhane, izingane eziyisishiyagalolunye kweziyishumi emazweni ahola kancane bezivele zingakwazi ukufunda nokuqonda umbhalo oyisisekelo, uma kuqhathaniswa nengane eyodwa kwezingu-10 emazweni ahola kakhulu.
Ubufakazi bokuqala bukhombisa ukuthi ukulahleka kokufunda kuzoba kukhulu phakathi kwamaqembu abhekelwe phansi. Ukungafani okukhulayo kwezemfundo kutholakala emazweni acebile, futhi. E-United States, ngokwesibonelo, ukulahleka kokufunda kwabafundi bebanga lesithathu labamnyama nabaseLatino, ngokwesilinganiso, kwakukuphindwe kabili lokho kwabafundi abamhlophe nabase-Asia baseMelika. Futhi ukulahleka kokufunda phakathi kwabafundi bebanga lesithathu abavela ezikoleni ezihlupheka kakhulu kwakuphindwe kathathu kulabo ontanga yabo ezikoleni ezihlwempu.
Imithi Yokugoma Yezingane Engaphezulu
Khonamanjalo, amazinga ejwayelekile omhlaba wokugomela izingane awele emazingeni agcina ukubonwa ngo-2005. Phakathi kokuqala kwalolu bhubhane nalapho izinsizakalo zezempilo ziqala ukubuyela engxenyeni yesibili yonyaka wezi-2020, zingaphezu kwezigidi ezingama-30 izingane emhlabeni jikelele ezaphuthelwa yimigomo yazo — okuyizigidi eziyishumi ngaphezulu ngenxa yobhadane. Kungenzeka ukuthi eziningi zalezi zingane azisoze zafinyelela kumanani.
Kepha lapha, imininingwane isimangaze: Onyakeni owedlule, besibike ukuthi i-Institute for Health Metrics and Evaluation ibikala ukuthi ukutholakala komuthi wokugoma kuzokwehla ngamaphesenti ayi-14 emhlabeni jikelele ngonyaka we-2020, obekuzoba yiminyaka engama-25 yenqubekela phambili ngaphansi komsele. Kepha ngokuya ngemininingwane yakamuva, kubukeka sengathi ukwehla kwangempela kokutholakala komuthi wokugoma — yize kwakubuhlungu kakhulu — kwakuyingxenye nje yalokho.
Ngenkathi siqhubeka nokuhlunga imininingwane, kwacaca ukuthi lokhu kwakungeyona inkinga: Ezinkomba eziningi ezibalulekile zentuthuko, umhlaba wenyuka onyakeni owedlule ukunqanda ezinye zezimo ezimbi kakhulu.
Thatha umalaleveva, isibonelo, osekunesikhathi eside waba esinye sezifo ezingalingani kakhulu emhlabeni: ama-90% amacala kamalaleveva atholakala e-Afrika. Ngonyaka odlule, i-World Health Organisation yabikezela ukuphazamiseka okukhulu emizameni ebalulekile yokuvikela umalaleveva eyayingabeka inqubekela phambili emuva kweminyaka eyi-10-futhi yaholela ekufeni kwabantu abengeziwe abangama-200,000 ababulawa yisifo esasingavinjelwa. Lokho kuveza kwagqugquzela amazwe amaningi ukuthi enze okuthile ukuqinisekisa ukuthi amanethi okulala ayasatshalaliswa futhi ukuhlolwa kanye nemithi elwa nomalaleveva ihlala ikhona. IBenin, lapho umalaleveva uyimbangela ehamba phambili yokufa, yaze yathola indlela yokuqamba kabusha phakathi kwalolu bhubhane: Bakha uhlelo olusha, olwabiwa ngamadijithi lwamanethi ombhede aphethwe zinambuzane, bathola amanetha ayizigidi ezingu-7.6 emakhaya ezweni lonke ezweni nje Izinsuku ezingama-20.
ICotonou, Benin Isithombe sihlonishwa nguYanick Folly / AFP nge-Getty Images
Bafanelwe ukubongwa umhlaba wonke.
Vele, inani eligcwele lomthelela wobhadane kuma-SDGs kuzothatha iminyaka ukuqonda ngokugcwele, njengoba idatha eningi futhi engcono itholakala. Futhi le datha ayinciphisi ukuhlupheka kwangempela okuye kwabangelwa yilolu bhubhane kubantu kuyo yonke indawo — kude nakho. Kepha iqiniso lokuthi singakhomba izimpawu ezinhle phakathi kobhadane lomhlaba wonke olwenzeka kanye esizukulwaneni liyamangaza. Njengoba beboshwe isandla esisodwa ngemuva kwabo, abantu abangenakubalwa, izinhlangano kanye namazwe badlulela phambili nangaphezulu ukuze bavuselele, bavumelane futhi bakhe amasistimu aqinile, futhi ngalokho, kufanele babongwe umhlaba wonke.
Ukubukwa Kwezokuvakasha Komhlaba Kwezokuvakasha Nobuphekula
Abathunyelwe e-Afghanistan batholwe e-Uganda: Kungani amahhotela ...
UNgqongqoshe Wezokuvakasha waseJamaica uqoke iqembu elizothuthukisa ...
I-IMEX America: Umcimbi we-New Corporate Focus
Ukuzamazama Komhlaba Okunamandla Kuzamazama EPhilippines
Umbiko omusha we-WTTC wokushayela ukutakula nokuthuthukisa...
Ungqongqoshe Wezokuvakasha waseSeychelles kuma-DMC
Imakethe yezinhlelo zokukhipha izimoto izofinyelela ku- $ 68.45 ...
Isiphepho i-In-Fa sikhubaza isifunda saseShanghai eChina
Abantu Abayishumi Balimale Esimeni Esigwazayo EsiseTokyo ...
UMengameli omusha waseZambia, uHichilema, uthanda ezokuvakasha: ...
Izintaba ezinyantisa umzimba ezindlekweni zezindiza zizovimba umoya ...
Izindiza ezingami ezisuka eToronto ziya eDublin eWestJet manje